» बाघले झम्टिएर लतार्दै लैजाँदा ममीले ‘बाबु’ भनेर गरेको पुकारले म अझैं झस्किरहन्छु,आमाको त्यो चीत्कार कहिले बिर्सिन्न ! भिडियो हेर्नुहोस… बाघले झम्टिएर लतार्दै लैजाँदा ममीले ‘बाबु’ भनेर गरेको पुकारले म अझैं झस्किरहन्छु,आमाको त्यो चीत्कार कहिले बिर्सिन्न ! भिडियो हेर्नुहोस… – हाम्रो खबर
बाघले झम्टिएर लतार्दै लैजाँदा ममीले ‘बाबु’ भनेर गरेको पुकारले म अझैं झस्किरहन्छु,आमाको त्यो चीत्कार कहिले बिर्सिन्न ! भिडियो हेर्नुहोस…
2021, January 6th, Wednesday
admin 1026 Views
कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका-४ कौवापुरकी ५० वर्षीया नन्दकली उपचार गर्न छोराको मोटरसाइकल चढेर नेपालगञ्ज आएकी थिइन्। तर घर फर्किनै नपाइ उनीमाथि बा’घले झ’म्टियो।
केही दिन यता छाति दुख्न थालेपछि भारतमा भएका श्रीमानको सल्लाहमा २२ वर्षीय छोरा सन्तोषको मोटरसाइकल चढेर चेकजाँच गर्न हिँडेकी थिइन्। उनलाई सुगर (चिनी रोग) थियो।
उनीहरू अम्रेनी चेकपोष्ट भन्दा ५/६ किलोमिटर अगाडि पुगेका थिए। सडकको उत्तरतर्फ अगाडि करिब १० देखि १५ मिटरको दुरीमा एक्कासी बा’घ देखापर्‍यो। उनले मोटरसाईकल अझै स्लो गरे। ‘मोटरसाईकल फर्काएर भाग्न मिल्ने ठाउँ नै थिएन। अगाडि यति ठूलो बाघ थियो के गर्ने गर्ने भयो,’ उनले भने, ‘त्यहीँ बिचमा बाघ जंगलतिर गयो। मौका छोपेर गाडीको स्पिड बढाएर भाग्न खोजेको तर बाघले हामीलाई झु’क्याएको रहेछ।’
त्यहीँ बेला बाघले एक्कासी उनीहरूको मोटरसाइकलमा झ’म्टियो। ‘ममीलाई झम्टिएर लग्यो,’ सन्तोषले भने, ‘त्यपसपछि ममीले एक पटक चिच्याएर ‘बाबू’ भन्नुभयो।’मोटरसाईकल सडकमा ढलिसकेको थियो। सन्तोषले पनि ममी–ममी भनेर कराए। रोए। तर उनको चि’त्कार बाघले सुनेन।
‘कराएपछि ममीलाई छोड्ला कि, भनेर म धेरै कराएँ,’ सन्तोषले भने, ‘तर, पा’पीले के छोड्थ्यो, त्यो अन्धकार रातमा कता लग्यो कता?’
सन्तोषका अनुसार बाघले सुरूमा उनैलाई टार्गेट गरेर झ’म्टिएको थियो। तर, उसको निसाना गुडिरहेको मोटरसाईकलका कारण चुक्यो। सन्तोषको दायाँ पट्टीको ज्याकेटको बाहुला च्यातिएको छ।
‘मलाई टार्गेट गरेर झम्टिएको बाघले बाहुला च्यातिपछि ममीलाई समात्यो र घि’सार्दै ल’ग्यो,’ सन्तोषले भने ‘मेरो होस नै भएन। के गरौं, के नगरौं भन्ने मनस्थितिमा पुगेछु। रूने कराउनेभन्दा अरू केही गर्न सकिनँ।’
बाघले आफ्नी ममीलाई ताने’र लगेको भन्दै खोजी कार्यमा सघाउन हारगुहार गरे। तर, त्यो निष्पट्ट अँध्यारोमा जंगलमा छिर्न कसैले सा’हस गरेनन्। गाडीबाट ओर्ल’नै डरा’ए। बरू ट्रकका मानिसले मोटरसाईकल उठाउन र चाबी निकालेर राख्न सल्लाह दिए। अरू सवारी साधनमा मानिसले सुरक्षाको कारण सन्तोषलाई पनि त्यहाँ नबस्न सुझाए।
गुडिरहेको मोटरसाईकलबाट मान्छे तानेर लाने न’रभ’क्षी बा’घको के विश्वास? सबैको सल्लाहमा सन्तोषलाई स्कार्पियोको मानिसले ५/६ मिटर पूर्वको अम्रेनी चेकपोष्टसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरे।
निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सन्तोषले सबै घट’ना विवरण सुनाए। उनीहरूले खोजीका लागि जान्छौं भनेर सन्तोषलाई शान्त्वना दिए। तर, खोजीमा गए नगएको उनले थाहा पाएनन्। रातभर सन्तोष निदाउन सकेनन् ।
उता घरमा सन्तोषकी श्रीमती चन्द्रा सु’त्केरी थिइन्। उनको ९ दिन अघि मात्रै छोरा जन्मिएको थियो। सुत्केरी श्रीमती घरमा एक्लै थिइन्। साथमा मोबाइल नभएकाले सन्तोषले घरमा खबर पनि गर्न पाएनन्। शनिबार उज्यालो भएपछि बाघले झ’म्टिँदा दुर्घ’टनामा परेको मोटरसाईकल चेक पोष्टमा राखेर सुर’क्षाकर्मीसँग आमाको खोजी गर्न गए।
खोजी गर्दा शनिबार मध्यान्ह १२ बजेतिर मात्रै नन्दकलीको श’व क्ष’तवि’क्षत अवस्थामा फे’ला पर्‍यो। अनुहार र दुबै तिघ्राको फिला बा’घले खा एको थि’यो। दे’ब्रे खुट्टा बाघ’ले शरीरदेखि अल’ग पारेको अवस्थामा थियो। त्यो सबै सन्तोषले हेर्न पनि सकेनन्। आफ्नै आमाको शरिर क्ष’तविक्षत अवस्थामा देख्दा सन्तानलाई कस्तो हुन्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ?
‘कल्पना नगरेकै घ’टना भयो, मैले यस्तो होला भनेर कहिलै सोचेको थिइनँ,’ फोन सम्पर्कमा सुँक्क सुँक्क गर्दै सन्तोषले भने, ‘ममीलाई धेरै समय बचाउन उपचारका लागि अस्पताल लगेर गएको थिएँ, ‍बाटोमै बाघ’को निशा’नामा पर्दा ममीलाई गु’माउन पुगेँ।’
‘बाघले झ’म्टिएर लता’र्दै लैजाँ’दा ममीले ‘बाबु’ भनेर गरेको पुकारले म अझैं झस्किरहन्छु,’ सन्तोषले भने, ‘आमाको त्यो चि’त्कार म कहिलै भु’ल्न सक्दिनँ। त्यो मेरो कानमा गु’न्जिरहेको छ।’
लम्किबाट प्लसटु उत्तिर्ण गरेका सन्तोष घरको आर्थिक अवस्था र साहुको ऋ’ण तिर्न भारत जाने तयारीमा थिए। तर, घरमा श्रीमती चन्द्रा दुई जिउकी भएकाले केही समयपछि जाने निर्णय गरेका थिए।
‘मेरो घरको मुल गा’र्जेन नै आमा हो,’ सन्तोषले भने ‘बुवा र दिदी रोजगारीका लागि इण्डिया बस्ने हुँदा घर व्यवहार सबै ममीले नै चलाउँदै आउनु भएको थियो।’
यो पिडादायिक भिडियो हेर्नुहोस…
घर सल्लाह अनुसार नै नन्दकली उपचार गर्न छोरासँग नेपालगञ्ज पुगेकी थिइन्। त्यो दिन (पुस १७ गते) दिउँसो १२ बजेतिर नरेन्द्रले श्रीमती नन्दकलीलाई फोन गरेका थिए।
‘फोनमा उनले टिभी निस्केको रहेछ भनिन्,’ नरेन्द्रले उनीहसँगको संवाद सम्झदै भने,‘टि’भी अरू रोगजस्तो ठूलो होइन, नियमित औषधी खान नभूल्नू ठिक हुन्छ भनेर सम्झाएको थिएँ।’
त्यतिबेला नन्दकलीले म रोगी भएँ। तपाँई कसरी खर्च पुर्‍याउँनु हुन्छ? मलाई जति गरे पनि औषधी नलाग्ने भयो? ऋण कसरी चुकाकउनु हुन्छ भनेर चि’न्ता गरेकी रहेछिन्। घरमा सुत्केरी बुहारी र नातिको राम्रो ख्याल गर्न आग्रह गर्दै नरेन्द्रले जवाफमा उनलाई ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरेका थिए। उनले तलब बुझेपछि केही पैसा पठाउनेसमेत बताएका रहेछन्।
अफसोच त्यहीँ संवादनै नरेन्द्रले आफ्नी श्रीमतिसँग गरेको अन्तिम कुराकानी हुनपुग्यो। एकाएक शुक्रबार राति साढे १२ बजेतिर इण्डियामै बस्ने नरेन्द्रका साला वीरेन्द्र थापाले आफ्नी दिदीलाई बाघले तानेर बेपत्ता पारेको खबर दिए। उनले विश्वासनै गर्न सकेनन्। औषधि गर्न पठाएकी श्रीमतीलाई बा’घले ता’नेर लग्यो भनेर उनले कसरी विश्वास गर्न सक्थे र।
उनले सन्तोष र श्रीमती नन्दकलीलाई फोन सम्पर्क गर्न खोजे। तर दुबैको फोन स्वीच अफ थियो। रातभर प्रयास गरे फोनै लागेन। घरमा ९ दिनकी सुत्के’री बुहारीको मोबाईल थिएन। अन्यौंलका बीच छटपटाई रहे।
शनिबार बेलुका नरेन्द्र घर आउँदा उनकी पन्ती नन्दकलीको चिता तयार भइरहेको थियो। उनले श्रीमतीलाई अ’न्तिम श्र’द्धा’ञ्जली’चै दिन भ्याए।
मृ’तक’का घरमा दुई छाेरी र कान्छा एक छाेरा हुन्। ती महिलाकाे पहिले पनि अर्को बिहे भएकालेे त्यताबाट दुई छाेरा थिए। अहिले तीन भाइ र दुई बहिनी आमाकाे अन्तिम कार्यका लागि लम्किचुहा ४ काे घरमा बसेका छन्। सेतोपाटी बाट